Rehefa manomana ny diany ho any Eoropa, ianao miatrika safidy maro! toerana tsy misy farany sy ny zavatra niainany, afaka mandeha mandritra ny taona maro ianao ary mbola mahatsapa fa tsy nahita zavatra tena ilaina. Izany dia mety hitarika amin'ny fanaovana ny hadisoana amin'ny dia ny fanoloran-tena be loatra, sy tsy hita teo amin'ny antsipiriany kely izay mahatonga Travel sy ny fiaran-dalamby mandeha tena mahagaga. Eto izahay mba hilaza aminao izay tsy tokony hatao, ary ahoana ny hanaovana drafitra ny nankany Eoropa, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany!
Alohan'ny afaka mahatsapa marina espaniola Tapas, piazzas tany Roma, na tafon-tampon-tampon-trano any Prague, manan-danja kely ny Admin dia takiana! Raha tsorina, dia vao mainka vonona ianao rehefa manomana ny diany ho any Eoropa, ny lehibe kokoa ny mety ny mahafinaritra sy ny adin-tsaina-maimaim-poana izay velona diany ho any ny fanantenanao.
Ity misy tendron'ny Save A Train: mifidy ny ambony dimy, tsy maintsy-de los fa Eoropeana traikefa nahafinaritra! Angamba&#8217;s misotro ao amin'ny Hofbrauhaus in Munich, na naka ny lakandrano fitsidihana amin'ny Amsterdam, na fandinihana David-tsy fijery maro – in Florence. Na inona na inona no, marika ireo izy ary drafitra ny diany manodidina azy. Tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby.
Soso-kevitra 4: Angony ny antontan-taratasy fitsangatsangananao ho anisan'ny drafitra fitsangatsanganana any Eropa
Araka ny voalaza eo anatrehan'i, mora ny manolo-tena be loatra ary manandrana manery mafy loatra. Tena tanteraka takarina. Ny fialan-tsasatra sarobidy tokony ampiasaina tsara, noho izany dia mora ny miezaka ny-entana ny itineraries rehefa mieritreritra ny nankany Eoropa. Na izany aza, izany dia afaka ny ho lafo vidy (tsy lazaina intsony mandreraka), toy ny-nampirina entana nivezivezy amin'ny toerana be loatra amin'ny andro vitsy loatra mitarika ho amin'ny fotoana bebe kokoa eny an-dalana, sy ny maro hafa, na mandatsa-dranomaso fiaran-dalamby tapakila. Amin'ny toe-javatra tafahoatra, dia mety nanelingelina ny diany, mamadika izany ho nanjavozavo ny zavatra nosoratany ny hotely maso-ins sy hanamarina-outs (amin'ny fonosana sy tsy tapaka unpacking), teo am-pijerena ny tsy-nitsidika tontolon'ny hazakazaka lasa ny fiaran-dalamby varavarankely. Raha azo atao, moramora. ianao afa-tsy amin'ny fitaterana sy hahazo fotoana bebe kokoa mba hijery ny toerana.
Ny toro-hevitra dia ny lohan'ny niaraka tamin'izay any amin'ny iray ATM rehefa tonga tany Eoropa, ary hiala vola mampiasa ny ATM karatra. Tena tsotra, ary ny tahan'ny fifanakalozana izay azonao noho ny raharaham-barotra dia saika azo antoka fa tsara lavitra noho ny tahan'ny izahay avy any an-trano na dia nahazo banky. Antsoy ny banky eo anatrehanao miala hanontany momba ny ATM barotra iraisam-pirenena saram, ary koa ny nampahafantatra azy ireo fa ianao dia mampiasa ny karatra any ivelany. Raha tsy lazao aminy, mety hanaitra azy ireo izany hieritreritra fa hosoka izany, ary hanakana ny karatra. koa, manontany raha toa ny banky manana toerana iraisam-pirenena na ny fiaraha-miasa amin'ny an-toerana banky any Eoropa.
Soso-kevitra 9: Aza adino ny miantso ny mpitondra findainao alohan'ny handaminana ny dianao mankany Eropa
Antsoy ny mitondra Rehefa feno ny hanaovana drafitra ny nankany Eoropa sy hahazo drafitra IF kasainao hampiasaina ny finday, ary avy eo dia ho azo antoka no nanangana ny finday mba tsy nahy angon-drakitra fiampangana (in fohy: vonoy finday tahirin-kevitra sy hametra ny isan'ny fampiharana finday izay afaka mampiasa tahirin-kevitra). ary, amin'ny maha-drafitra, hikambana amin'ny hanafaka Wi-Fi ho an'ny downloading tambajotra ka naniraka mailaka, manamarina ny Internet, ary mampiasa Apps. Eoropa maro Wifi toerana mafampana, ka dia tsy ho avy amin'ny mifandray ela. -tsy izany, mividy karatra SIM ho an'ny finday rehefa mahazo any Eoropa.
Users manomboka ny maka ny tanàna mba hanomboka sy mahavita in (amin'izao fotoana izao, fa ilaina ny hanomboka sy hifarana ilay dia ao amin 'ny toerana). Safidio avy eo ny daty fiaingana, mandra-pahoviana ny diany ho sy ny maro toerana mampiditra. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ihany koa raha te-hijery tanàn-dehibe any Eoropa, ny Vondrona eropeana, na ny faritra Schengen fotsiny. Dia avy eo ny fampiharana ny hamorona faritany haleha izy, tanteraka tamin'i Airbnb tahan'ny amin'ny isan-tanàna, ho an'ireo eo amin'ny teti-bola.
Afaka mampiasa ny mpandeha ny Eightydays tranonkala or the newly launched iOS App to plan their European voyages.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplan-trip-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)